Welcome to SME Development Agency
ဥပဒသေ နှငျ့ လုပျထုံးလုပျနညျးမြား
၂၀၁၇ ခုနှဈ မတျလအတှငျးလုပျငနျးဆောငျရှကျမှုအခွအေနမြေား
Written by SME Development Agency
(က) နည်းပညာနှင့်ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
(၁) SME လုပ်ငန်းများအတွက် Database နှင့် Information Hub တည်ဆောက် လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များအား ထောက်ပံ့ ပေးခြင်း၊
(၂) နည်းပညာနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ တောင်းခံလာသည့် SME Customer သို့ လက်ခံဆွေးနွေးပေးခြင်း နှင့် Advisory Service ပေးခြင်း ၊
(၃) ကုန်သွယ်မှု နှင့် ဈေးကွက်တွင် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် နှင့် ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်နိုင်ရန် တို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ကူညီထောက်ပံ့ ဖြန့်ဖြူပေးခြင်း၊
(၄) Workshop, Seminar များ၊သင်တန်းများ ၊ အစည်းအဝေးများအား ပြည်တွင်းပြည်ပ ပညာရှင်များ၊မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လက်ခံကျင်းပခြင်း၊
(၅) SME ဇွံ့ ဖြိုးရေးအတွက် Entrepreneurship Training For SME သင်တန်းများအား ၊ ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းသင်တန်းပို့ချခြင်း၊
(၆) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံဗဟုသုတများ မျှဝေနိုင်ရန် ပြည်တွင်းရှိ
SMEs Cluster များနှင့်ညှိနှိုင်းခြင်း၊ပြည်တွင်းပြည်ပမှ အတွေ့အကြုံဗဟုသုတများကို လေ့လာ၍ ပြန် လည်ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊
(၇) Incubation ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ASEAN အဖွဲ့အစည်းများမှ ပညာရှင်များ နှင့် ပူးပေါင်း၍ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၈) ASEAN အဖွဲ့အစည်းများမှ ပညာရှင်များ နှင့် အခြား သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနများနှင့် ပူးပေါင်း၍ "One Village One Product " Programဆိုင်ရာကိစ္စများအား ဆောင်ရွက်ခြင်း
(၉) စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများမှ သင်တန်းဆင်းကျောင်းသားစာရင်းများ ပြုစုခြင်း နှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖြစ်ပေါ်စေရန်SME လုပ်ငန်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊
(၁၀) အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းစာရင်းများအား သုံးလပတ် အလိုက် စာရင်းပြုစုခြင်း၊
(၁၁) www.smedevelopmentcenter.gov.mm website တွင် SME လုပ်ငန်းများ သိရှိလိုသည့် နည်းပညာသတင်းများ၊ ဗဟုသုတဆိုင်ရာ မေးမြန်းမှု၊ ကုန်သွယ်မှု နျင့် ဈေွး့က်တွင် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် နှင့် ဈေးကွက်ချဲ့ထွင် နိုင်ရန် အတွက် သက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအား အချိန် နှင့် တပြေးညီ ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း၊
(ခ) မူဝါဒနှင့်ပြည်ပရေးရာဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၁ ASEAN SMEWG ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား စီစဉ်ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
• (၂) AEC ဆိုင်ရာလစဉ် အစည်းအဝေးများအတွက် များ စုစည်း ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
• (၃) နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
• (၄) အာဆီယံနိုင်ငံများမှ အဖွဲ့များနှင့် ဆက်သွယ်၍ SME ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရန် ညှိနှိုင်းခြင်း
• (၅) မြန်မာ SME များ၏ Festival ,Trade နှင့် Exhibition များတွင် ပါဝင် ဆင်နွှဲ နိုင်ရန် နှင့် ဈေးကွက် ချဲ့ထွင်နိုင်ရန် ကိစ္စရပ်များ စီစဉ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
• (၆) SME လုပ်ငန်းများ International Market သို့ ၀င်ရောက်နိုင်ရန် အတွက် Online Service ဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရေး ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
• (ရ) ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ မေးမြန်းချက်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုမှုများ အတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း၊ ရလာဒ်များကို တင်ပြ၍ အတည်ပြုချက် ၇ယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊
· (၈) ASEAN Strategic Action Plan ပါစီမံကိန်းများကို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
• (၉) အာဆီယံစီမံကိန်းဆိုင်ရာ ပြည်ပ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ၊ သင်တန်းများ သို့ မြန်မာများမှ ပုဂလိက ကိုယ်စာလှယ်များ တက်ရောက်နိုင်ရေး စီစဉ်ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
• (၁၀) ဆိုင်ရာပညာရပ်များ၊ဆိုင်ရာသင်ခန်းစာများအားစက်မှုဇုန်များ၌ ပို့ချခြင်း၊
• (၁၁) မြန်မာ SME များ ASEAN Award ရရှိစေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
• (၁၂) Law နှင့် Policy ရေးဆွဲခြင်း ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
• (၁၃) ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်SME Center ၌တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း၊
(ဂ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လုပ်ငန်းညှိုနှိုင်းရေးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
(၁) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ချိတ်ဆက် မြှင့်တင်နိုင်ရေး အတွက် ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများ/ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ နှင့် ညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊
(၂) SME လုပ်ငန်းများ၏ ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ASEAN Business Advisory Council ၏ ညှိနှိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်အရ အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထူးချွန်ဆု နှင့် အောင်မြင်မှု အရှိဆုံး လုပ်ငန်းကုမဏီများကို ASEAN Business Awards အသိအမှတ်ပြု ဆု ချီးမြှင့်နိုင်ရန် အတွက် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်၇ုံးသို့ ညှိနှိုင်းပေးပို့ခြင်း၊
(၃) အသေးစား အလတ်စားလုပ်ငန်းများတွင် လိုအပ်လျက်၇ှိသော အင်ဂျင်နီယာများ၏ အကူအညီရယူလျက် စက်ပစ္စည်းများကို ပြည်ပမှ ၀ယ်ယူရသည့် ဈေးနှုန်းထက် ထက်ဝက်ခန့် သက်သာသည့် နှုန်းဖြင့် ရရှိစေရန် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(၄) လုပ်ငန်းထပ်မံတိုးချဲ့လိုသော အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများမှ ချေးငွေအဆိုပြုလွှာများ လာရောက်တင်ပြသည့်အနက် ချေးငွေရယူခြင်း နှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များနှင့် ကိုက်ညီသော လုပ်ငန်းများအား ချေးငွေ စစ်ဆေးရေးကော်မတီ မှ လုပ်ငန်းအမှန်တကယ် ထုတ်လုပ် လုပ်ကိုင်ခြင်း ရှိ။မရှိ နှင့် လုပ်ငန်းတိုးတက်ရန် အလားအလာ ရှိ/မရှိ သွားရောက် စစ်ဆေးပေးခြင်း နှင့် Credit Issue ထောက်ခံစာများ ထုတ်ပေးခြင်း
(၅) ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ဈေးကွက်သို့ ပိုမိုတွင်ကျယ်စွာ ဝင်ရောက်နိုင်စေရန် အတွက် showroom နှင့် ကုန်စည်ပြပွဲများကျင်းပနိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။
(၆) ချေးငွေဆိုင်ရာ လွှတ်တော်မေးခွန်းများ ဖြေကြားခြင်း
(ရ) ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ စွမ်းဆောင် ရည်အကဲဖြတ်အဖွဲ့သို့အကြံပြုစာ များပါ် ဆာင် ရွက် ပြီးစီးမှု များ တင်ပြခြင်း ၊
(၈) ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ သို့ နှင့် ချေးငွေဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်း မှုများ အား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း၊
SME Saturday Talk
SMEs Policy Guide Book မြား
SMEs ရုံးခှဲ လိပျစာမြား
SMEsဌာနအလုပျရုံဆှေးနှေးပှဲ pdf မြား
အသုံးပွုပွီး စကျပစ်စညျးမြား တငျသှငျးခှငျ့ မူဝါဒ
Join our ASEAN SME Service Centre to connect with SME Service provides and other SME Users you may know
အခြိနျနဲ့တပွညေီ သတငျးမြားရယူရနျ အခမဲ့ စာရငျးပေးသှငျးနိုငျပါသညျ။
အမှတျ(၅)၊ သလ်လာဝတီလမျး၊ (၇) မိုငျ၊ မရမျးကုနျးမွို့နယျ၊ ရနျကုနျမွို့ ဖုနျး-(၀၁)၆၆၀၀၄၁၊ ၆၅၅၇၀၆၊ ၆၆၅၈၁၀
iconစကျမှုဝနျကွီးဌာန၊ ရုံးအမှတျ(၄၁)၊ ရာဇဌာနီလမျး၊ နပွေညျတျော
icon၀၆၇-၄၀၈၁၂၈၊ ၀၆၇-၄၀၈၃၉၄ ၊ ၀၆၇-၄၀၈၃၉၅
iconMonday - Friday:9: 30AM - 16PM
icon၃၅ ဘီ/၁၅၊ တက်ကသိုလျရိပျသာလမျးသဈ၊ ဗဟနျးမွို့နယျ၊ ရနျကုနျမွို့
icon၀၁- ၅၅၉၂၃၉၊ ၈၆၀၃၈၂၆၊ ၈၆၀၃၈၂၇၊ ၅၄၆၀၅၁(ဖကျဈ)
Copyright © 2018 SME Development Agency. All Rights Reserved. Developed by DMYANMAR